इतिहास अभिलेखागार - 1aviagem.com
उरुग्वे दक्षिण अमेरिका बाहेक अन्य देश। - मोन्टेभिडियो
यस क्वारन्टाइनमा खाली समयको फाइदा उठाउँदै, मैले पुरानो यात्राबाट फोटोहरू हेर्ने निर्णय गरें र ... मैले याद गरे कि मसँग कल्पित भन्दा ब्लग अपडेट गर्न मसँग धेरै सामग्रीहरू छन्। त्यसैले आज म उरूग्वेको बारेमा थोरै कुरा गर्न लागिरहेको छु। एउटा देश जुन दक्षिण अमेरिका भन्दा धेरै फरक छ, र किन? उनीहरूको सार्वजनिक नीतिहरूको कारण। मा ...
थप पढ्नुहोस् उरुग्वे दक्षिण अमेरिका बाहेक अन्य देश। - मोन्टेभिडियो
एक ब्राजिलियन संग साक्षात्कार, एक विनिमय को अनुभव कस्तो छ? - फायरन्ज - इटाली
एक्सचेन्जको अनुभव कस्तो छ? आज हामी तपाईलाई ल्याउन लागेका छौं विदेश पढेको अनुभव कस्तो छ। यो गर्नको लागि म थेजाको मद्दतमा भरोसा राख्नेछु। ठिकै छ, हामी उनीसँग भेट्यौं जब उनी ब्राजिलिया आए उनको बहिनीको जन्मदिन मनाउन। उनले "किनाराहरू बिना विज्ञान" कार्यक्रममा भाग लिइन् र धेरै राम्रो…
थप पढ्नुहोस् एक ब्राजिलियन संग साक्षात्कार, एक विनिमय को अनुभव कस्तो छ? - फायरन्ज - इटाली
बाँया बनाम दाँया विचारधारा, किन तपाईं पट्टि हुनुहुन्छ भनेर परिभाषित गर्न असम्भव छ?
ब्राजिलमा हालसालै एउटा कथित वैचारिक युद्धको बारेमा धेरै कुरा भएको छ, "धेरै दायाँ" लाग्ने बिरूद्ध "बढी दायाँ" लाग्ने मानिसहरु बीच। तर के तपाईंलाई थाहा छ यी सर्तहरूको अर्थ के हो? हामी सुरू गर्नु अघि, यी सर्तहरू कहाँबाट आएका थिए हेरौं। बाँया र दाँयाको उत्पत्ति।…
थप पढ्नुहोस् बाँया बनाम दाँया विचारधारा, किन तपाईं पट्टि हुनुहुन्छ भनेर परिभाषित गर्न असम्भव छ?
आउटबर्स्ट - ब्रासिलिया - ब्राजील
त्यहाँ १०,१10.114 मारिएका छन् ० 09/०05/२०१० मा (र बढ्दो), यी केवल COVID-2020 को कारणले हो। के पीडित वक्र कर्भको शिखर हेर्न चाहनेहरूको लागि पर्याप्त माथि गए? तपाईं मरेका मजदुरहरूसँग कसरी अर्थतन्त्र बचत गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ यदि तपाईं उनीहरूको छवि मृत्युसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरू ...
थप पढ्नुहोस् आउटबर्स्ट - ब्रासिलिया - ब्राजील
म्यास र विश्व पूर्वानुमान को अन्त्य - मेक्सिको
मायाले संसारको अन्त्यको बारेमा हामीलाई के सिकाउन सक्छ? केही समय अघि २०१२ मा धेरै मानिसहरूले यस संसारको अन्त्यको बारेमा सुनेका थिए। र म्यान सभ्यता वरपर धेरै रहस्यवाद उठेको थियो। सबै पछि, अफवाहहरु म्यान पात्रो अनुसार, संसार मा अन्त हुनेछ भनेर भने ...
थप पढ्नुहोस् म्यास र विश्व पूर्वानुमान को अन्त्य - मेक्सिको
पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटोग्राफिक सफारी र जनावरहरूको पाठ - दक्षिण अफ्रिका
नमस्कार साथीहरु, यो पोस्ट मेरो पहिलो अफ्रिकाको यात्राको बखत सिकेका सुझावहरू र पशु व्यवहारको मिश्रण हुनेछ। क्रुगर पार्कमा सल्लाहहरू अधिकांश व्यक्तिहरू जसले दक्षिण अफ्रिका जाने बारे सोच्दछन्, वा जो त्यहाँ आएका छन् सोच्दछन्। एक फोटोग्राफिक खेल ड्राइभ सफारी गर्न। O ...
थप पढ्नुहोस् पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटोग्राफिक सफारी र जनावरहरूको पाठ - दक्षिण अफ्रिका
यो नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात कसरी हुन सक्छ? - एस्टोनिया - तल्लिन
इस्टोनियाको राजधानी टल्लिनमा हाम्रो पहिलो यात्रामा, जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आइपुग्यौंौं तब हामी एक असामान्य विमानस्थलबाट छक्क भयौं। वास्तवमा यो जस्तो देखिन्थ्यो यो यो हो कि यसलाई सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा रमाइलो एयरपोर्टहरू मध्ये एक हुन डिजाइन गरिएको थियो। म स्वीकार गर्दछु कि मेरो यात्राको क्रममा केही एयरपोर्टहरू ... जस्तो देखिन्छ।
थप पढ्नुहोस् यो नि: शुल्क सार्वजनिक यातायात कसरी हुन सक्छ? - एस्टोनिया - तल्लिन
हामी तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्न सक्छौं? उत्तर तपाईको लागि त्यहाँ हुन सक्छ।
कसरी टुरिस्ट समूहको साथ विश्व युद्ध III को जीत?
थप पढ्नुहोस् हामी तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्न सक्छौं? उत्तर तपाईको लागि त्यहाँ हुन सक्छ।
के नाइट्स टम्प्लर अस्तित्वमा थियो?
पुरानो महाद्वीप बाट एक महान कथा।
थप पढ्नुहोस् के नाइट्स टम्प्लर अस्तित्वमा थियो?
पछिल्लो पोस्टमा प्रतिज्ञा गरेझैं म आठौं महादेशको बारेमा कुरा गर्ने छु। र आठौं महादेश कहाँ छ? यो हाम्रो टाउको माथि रहन्छ। अन्तरिक्षमा, पृथ्वी कक्षामा! सम्पूर्ण ब्राजिलमा आगोको आकार थाहा पाउनको लागि उपग्रह छविहरूको खोजीमा। त्यो हो, main मुख्य ब्राजील बायोम सहित ...
थप पढ्नुहोस् आठौं महाद्वीप
के म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि हाम्रो आफ्नै (मानव जाति) मा पृथ्वीले सातौं महाद्वीप प्राप्त गर्यो? हो, समाचार राम्रो देखिन्छ, तर दुर्भाग्यवस यो छैन। समुद्रका धारहरूले बोकेका समुद्री सतहहरूमा जम्मा हुने फोहोरका कारण क्यालिफोर्निया र हवाईको बीचमा प्रशान्त महासागरको बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छ ...
थप पढ्नुहोस् सातौं महाद्वीप
नोरे-डेम को श्रद्धांजलि
मलाईँ यो पोष्ट कसरी सुरु गर्ने भनेर थाहा छैन, त्यसैले म तपाईंलाई उनको विचार के हो बताउनेछु। यो Notre-Dame क्याथेड्रल, जो अप्रिल १ 15, २०१ on मा जलाइएको थियो श्रद्धांजलि अर्पण गर्न छ। यो यस्तो चीज हो जसले धेरै मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ, यस तथ्यले ल्याएको हंगामा र उदासीनताका साथ। मेरो लागि जो साथीहरू र फ्रान्सको साथ यात्रा गर्दै थिए।
थप पढ्नुहोस् नोरे-डेम को श्रद्धांजलि
क्याफिन र कोकीन ड्रगहरू प्रतिबन्धित छन्?
अघिल्लो पोष्टमा हामीले पेरूको महिला र पेरूको बारेमा ब्राजिलका पर्यटकसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौं। (तपाईं यहाँ क्लिक गरेर यो उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ)। उहाँकै कारणले मैले पेरूको कोका चियाको बारेमा जिज्ञासा ल्याउने निर्णय गरें। कोका चिया पहिलो उत्सुकता भनेको कोका चिया त्यहाँ लगिएको छ ...
थप पढ्नुहोस् क्याफिन र कोकीन ड्रगहरू प्रतिबन्धित छन्?
जब तपाइँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ र फ्रेन्च ब्राजिलियनसँग यो के हुन्छ भने फ्रान्सेलीले उनीहरूको नाकहरू मोडिदिन्छन्?
आज हामी भाषाहरूको बारेमा कुरा गर्छौं र किन फ्रान्सेलीहरूले उनीहरूको नाकमा झिम्काइन्छन् जब हामी उनीहरूसँग अंग्रेजी बोल्छौं। खैर, लगभग सबै व्यक्तिहरु लाई मैले फ्रान्सको बारेमा कुरा गरें, र जो त्यहाँ थिए, जहिले पनि दुई कुरा भन्छन्: कि त्यहाँ सुन्दर, अद्भुत ठाउँ छ। र यदि फ्रान्सेलीहरूले उनीहरूको नाक झिम्काए भने ...
थप पढ्नुहोस् जब तपाइँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ र फ्रेन्च ब्राजिलियनसँग यो के हुन्छ भने फ्रान्सेलीले उनीहरूको नाकहरू मोडिदिन्छन्?
चिलीको पहिलो भ्रमणमा एक ज्वालामुखी र चमत्कार
यी दिन म हालै व्यक्तिगत घटनाक्रम वा मेरो परिवारका मानिसहरूको साथमा भावनात्मक छु। यी निदानहरू र रोगहरू बीचको प्रश्नहरू जुन हाम्रो विश्वासको अधिक आवश्यकता हुन्छ। र त्यो भगवान बाट एक कदम चाहिन्छ। त्यसैले मैले एक यात्रामा चमत्कारको बारेमा लेख्न निर्णय गरें। केही समयको अन्तमा ...
थप पढ्नुहोस् चिलीको पहिलो भ्रमणमा एक ज्वालामुखी र चमत्कार
मिलियनलाई कस्तो लाग्छ? (भियतनाम)
मान्छेहरु, अर्को पोष्टमा मैले भियतनामको युद्ध र देश र विश्वका लागि हुने नतिजाहरुको बारेमा कुरा गरें, किनकि अन्य महादेशका अन्य देशहरु पनि यसमा संलग्न थिए / युद्धको कारण थियो। (तपाईले यस पोष्टलाई यहाँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ)। अघिल्लो पोष्टमा मैले यस बारेमा पनि कुरा गरें कि तपाईं कसरी "पैसा" बचत गर्न सक्नुहुन्छ?…
थप पढ्नुहोस् मिलियनलाई कस्तो लाग्छ? (भियतनाम)
मलेसियाको बारेमा के हो, हामीले के भन्नु पर्छ?
असल मान्छे, यो पोस्ट सुखद आश्चर्य को बारे मा छ जब म एशिया मा मेरो यात्रा स्क्रिप्ट मा कोलालाम्पुर सहित थियो। कुआलालम्पुर मलेशियाको राजधानी हो। (हो, हामी पहिले नै मलेसियामा गए) र मलाई पहिलो झटका थियो कि उनीहरु प्रायः मुसलमान छन्। मलाई आशा छ कि तिनीहरू प्रायजसो बौद्ध थिए, यस्ता ...
थप पढ्नुहोस् मलेसियाको बारेमा के हो, हामीले के भन्नु पर्छ?
वियतनाम - युद्ध युद्ध संग्रहालय के हो?
यो पोस्टमा हामी युद्धको बारेमा कुरा गर्नेछौं, विशेष गरी भियतनामको युद्धको बारेमा। हामीले हो ची मिनमा रहेको युद्ध अवशेष संग्रहालयको भ्रमण गरेका थियौं र तपाईंलाई केही शिक्षाहरू पनि ल्याएका छौं। यहाँ हामीसँग जिज्ञासा थियो र युद्ध संग्रहालयमा जान र यातना शिविरमा प्रवेश गर्ने मौका। पहिलो…
थप पढ्नुहोस् वियतनाम - युद्ध युद्ध संग्रहालय के हो?
थाईल्याण्डको पहिलो भ्रमण। टेम्पल्स, टिप्स, लोकोमोशन।
र यो थाईल्याण्डमा जस्तो महसुस गर्दछ? यहाँ हामी ढुवानी को माध्यम को बारे मा थोडा कुरा गर्नेछन्, वहाँ कसरि प्राप्त गर्न को बारे मा सुझाव, जिज्ञासाहरु र के गर्न को लागि। चलो त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने? त्यहाँ पुग्नु अघि पीला बुखार विरुद्ध टीकाको लागि अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय। गंभीरतापूर्वक, यदि एक चीज हो जुन तपाईले तपाइँको यात्राको सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ ...
थप पढ्नुहोस् थाईल्याण्डको पहिलो भ्रमण। टेम्पल्स, टिप्स, लोकोमोशन।
नामको कारण 1aviagem?
खैर, यो नाम मैले यूट्यूबमा एउटा च्यानलको सुरुवात गरे पछि यो नाम स्वीकार गरियो। एक अद्वितीय नाम प्राप्त गर्न आवश्यक थियो। च्यानल (र अब ब्लग पनि) यात्राको बारेमा कुरा गर्नेछ। म सामान्यतया यात्रा दोहोर्याउँदैन, म यो जब नयाँ देश वा नयाँ गन्तव्यहरूको लागि सम्भव हुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं गन्तव्य परिवर्तन गर्नुहुन्छ र फरक स्थानमा यात्रा गर्नुहुन्छ ...
थप पढ्नुहोस् नामको कारण 1aviagem?
सिंगापुर - प्रदर्शनका बारेमा र मरीना खाई रेन्ड्स
र मैले यो पोस्टलाई पहिलो पटक तपाईंलाई धन्यवाद पुर्याउन सक्दिन जुन भिडियो मनपर्ने र यूट्यूब च्यानलमा सदस्यता लिइयो 1aviagem, र त्यो जस्तै दिनुभयो। यो साइटमा सिंगापुर वा सिंगापुर ल्याउन समय हो। यसैले म तपाईंको सबैलाई धन्यबाद गर्दछु जसले यस परियोजनालाई च्यानलबाट समर्थन गरेको छ ...
थप पढ्नुहोस् सिंगापुर - प्रदर्शनका बारेमा र मरीना खाई रेन्ड्स
रूसी स्मृति चिन्हको सुझाव।
तपाईका लागि राम्रा मानिसहरू जो रसिया, सेन्ट पिटर्सबर्ग, मस्को, नोभ्गरोड, इत्यादिमा जाँदैछन्। टिप त्यहाँ स्मृति चिन्हको आनन्द लिने हो। नोट गर्नुहोस् कि रूसी "शिल्प" सँग प्रसिद्ध फेबर्गे अण्डा, म्याट्रोस्कास र अन्य धेरै छन्। र एन्क्रन्टहरू के हुन् विवरणहरू! तलको भिडियोमा, हामीसँग Fabergé अंडा को प्रतिकृति छ।
थप पढ्नुहोस् रूसी स्मृति चिन्हको सुझाव।
रूस भ्रमण गर्नु अघि मैले के गर्नु पर्छ? (सुझावहरू)
रूसको लागि एक शान्त यात्रा गर्न मनमा राख्नुहोस्: 1- यदि तपाई ब्राजिल हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई केवल पासपोर्टको आवश्यकता छैन। 2- मुद्रा को रूस रुबल छ, जो वास्तविक सम्बन्ध मा समर्पित छ। हाल, 1 रियल लगभग 18 रुबलहरूको लायक छ। 3- नकदको बारेमा कुरा गर्दै, एटीएममा नगद गर्न सक्दछन् ...
थप पढ्नुहोस् रूस भ्रमण गर्नु अघि मैले के गर्नु पर्छ? (सुझावहरू)